ငှက်နက်နှင့်ငါးဖြူ အာကန်ဆပ်တွင်သေကြခြင်း…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ငှက်နက်နှင့်ငါးဖြူ အာကန်ဆပ်တွင်သေကြခြင်း…။
Posted by kai on Jan 3, 2011 in News | 12 comments
အတောင်နီ ငှက်နက် အကောင် ၅၀၀၀ လောက်ဟာ ယူအက်စ်အာကန်ဆပ်ပြည်နယ် လူ၅၀၀၀ လောက်နေတဲ့မြို့ လေးတမြို့ ပေါ်ကို နှစ်ဆန်းရက်မတိုင်မှီနာရီပိုင်းအလိုမှာ တဖြုတ်ဖြုတ်ကျ သေကြပါတယ်..။
ဒီနေ့တော့ အဲဒီနားလေးတင်ပဲ ငါးဖြူတွေ အကောင်၁သိန်းလောက်သေနေတာတွေ့ပြန်ပြီတဲ့လေ..။
အဲဒီမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက .. ငါးေ၇ာ။ငှက်ရော … ဓါတ်ခွဲခန်းပို့ လေ့လာဆန်းစစ်နေကြပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်သေတာတော့ မဟုတ်ဖူးဆိုကြပါတယ်..။
ဘာတွေဖြစ်နေသလဲတော့မသိ..။ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ကမ္ဘာပျက်တော့မဲ့ရက်အတွက် နိမိတ်ပြနေတာလားလို့တောင်ပြောကြတာပါ။
စိတ်တော့ သိပ်မပူကြပါနဲ့.. ။ အသားစားသူတွေအတွက် ပံ့သကူသား.. ရိက္ခာရတယ်သဘောထားကြပေါ့နော….။
အဲဒီငှက်တွေငါးတွေက သူ့အသက်သတ်စားတဲ့ အကောင်တွေလေ။ သက်သတ်လွတ်စားဖို့ သဘာဝတရားကြီးက နမိတ်ပြနေပြီပဲ။ သတိတရားရ ကြပါတော့ဗျို့။
သင်တင့်လျောက်ပတ်ရုံလောက်ပဲ စားပါတယ် ။ဒါတောင်အရသာခံပြီးစားတာမဟုတ်ပါဘူး ။ အဟာရဖြစ်ရုံ ၀မ်းဟာမနေရုံးလောက်ပဲ မှီဝဲစားသုံးတာပါ
ကိုနေက ..ဘုန်းကြီးဝိနည်းလိုက်နာပြီး … လူလာလုပ်နေတာကိုး..။
စားစား…အရသာရှိရှိစား..။ခံစားပြီးစား..။ ရှာဖွေပြီးစား..။ ငွေရှာပြီး ကောင်းကောင်းဝယ်စား..။
ဟိုတယ်တွေ..ဆိုင်ကောင်းတွေရှာစား….။ ဒါက လူတွေအလုပ်..။ ဒါမှ လူဖြစ်ကျိုးနပ်မှာပေါ့ကွယ်…။
လူတွေများများ ..သက်သတ်လွတ်စားရအောင်တိုက်တွန်း..။ အသားမစားကြရအောင်တိုက်တွန်း..။
ဒါမှ … ကိုယ်ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့..၀ယ်ရမယ်ပေါ့ကွယ်..။
အဲဒီလို သူ့ဖာသူပြုတ်ကျပြီး ဘာမှန်းမသိ သေတဲ့ ပံ့သကူအသားတော့ သွားမစားလေနဲ့..။ ရှေးက .. မတွက်တတ်မချက်တတ်..။ မိုက်ခရိုစကုပ်မရှိမို့ ..
မသိလို့ စားကြရတာ..။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ။ ပိုးတွေ။ အဆိပ်တွေအကြောင်း မသိလို့..စာကြပြီး အသက်တိုကြတာ..။
စားလို့ … ရောဂါဖြစ်တာ..။
အသား၊ငါး ဆိုတာလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် .. သာစားသင့်ပါတယ်..။
လူသေလို့နတ်ပြည်ရောက်ရင်လည်း … နတ်သုဒ္ဓါဆိုတာက… အရသာအင်မတန်ရှိတာဆိုသတဲ့..။
နတ်သားတွေမှစားရတာနော..။ ဂေါတမဘုရားရှင် မယ်တော်တောင် နတ်သားဖြစ်သတဲ့..။
နတ်သားဆိုတာ.. ကုသိုလ်ကောင်းမှဖြစ်တာတဲ့..။ သူတို့လည်း ကာမရော..။ လျှာအရသာရော.. တချိန်လုံးခံစားကြရတာ..။
ပြောရရင် ..အပေါ်က အင်္ဂလိပ်သတင်းမှာ… စ,တွန်းနေတာတွေ့ရမယ်..။
ကမ္ဘာပျက်တာ ..မပျက်တာအပထား..။ ၂၀၁၂ အထိ အလုပ်တွေတော့ ရအောင် ဖေါ်သွားမှာတော့ သေချာနေပါတယ်..။
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ တုံးကလည်း ၀ိုင်တူးကေဆိုပြီး ကွန်ပျူတာသမားတွေ လုပ်စားသွားတာပေါ့..။
မာယာလူမျိုးတွေရဲ့ ပြက္ခဒိန်က .. ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁မှာကုန်တာ..။ နှစ် ၅၁၂၅ပေါ့..။
အခု..သတင်းမှာ.. ငှက် ၅၀၀၀ ရယ်..။ အဲဒီက မိုင် ၁၂၅ဝေးတဲ့နေရာက ငါးသေတာရယ်… ရေးထားတယ်..။
ဂဏန်းအားဖြင့် ၅၁၂၅ ပါနေတယ်ပေါ့..။
ကိုခိုင်က အဲဒိလို သင်္ချာ တွေလည်း ၀ါသနာ ပါတာလိုက်စားတာပဲလား
ကျွန်တော်ကတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ 15နှစ်လောက်က လိုက်စားဖူးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မှန်တာ မမှန်တာ ထက် လက်တွေ့လုပ်ရတဲ့ လုပ်တွေကို အနှောက်အယှက်တွေ ပေးပေးလာလို့ ဆက်ပြီးအာရုံမထားတော့ဘူးလေ
ဥပမာ – ကျွန်တော်က တနင်းလာ သား အသက်40 ကျော် ။ ဗေဒင်အရဆို စနေ ဂြိုလ်စား ဘာမှအကောင်းမရှိဘူး အတိတ်ကံ ပါလာ ရင်တော့ ထီပေါက်တတ်သတဲ့ အဲဒိတော့ ဒီ10 နှစ်အတွင်းမှာလုပ် သမျှ အလုပ်တိုင်းမှာ ဒီအတွေးကြီး ၀င်နေရင် လုပ်ချင်တာတွေ ခုလိုလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ စိတ်ထဲမှာ ဒွိဟ ဖြစ်ပြီး လုပ်ရကောင်းနိုး မလုပ် ၇ကောင်းနိုး ဖြစ်နေမှာ အဲဒါကြောင့် ပါ ။ သက်သတ်လွတ်စားတယ်ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အရက်သမား ဘ၀တုန်းက ပြောင်ခဲ့ဖူးတယ် ။ အရက်သာသောက်နေတာ သက်သတ်လွတ်စားတယ် ဆိုပြီးတော့လေ ။ အရက်သူ့အသက်မှမပါတာကို နော့။ ခုတော့ အစွန်းတွေကိုရျောင်ပြီး သင့်တင့်နဲ့ အနေ အထိုင် အစား အသောက် အပြောအဆို နဲ့ပဲ နေသွားချင်တော့တယ်။ ဒါတောင် တစ်ခါတစ်လေ မထင်ရင်မထင် သလိုပြောပြောတတ်လို့ ထိမ်းနေရသေးတာ။ ကိုယ်က ပြုပြင်ချင်တဲ့ စိတ်ကလွဲပြီး ကျန်တာဘာမှတော့မရှိပါဘူး ။ ကိုယ်သိသလို သိစေချင်တာ ။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်အမြင်စောင်းသွားတာ ကိုယ်သိထားတာ လွဲနေတာ မျိုးဆိုလည်း သိန်ုင်အောင်ရေးချပြနေတာပါ ။ အနောက်နိုင်ငံမှာ 40ပြည့်မှဘ၀ စတာဆိုပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ အဖိုးကြီး စာရင်း သွင်းချင်နေပြီလေ နော့
ရာဟူးသတင်းရေးတဲ့သူ လုပ်စားနေတာကို .. ဖွင့်ပြတာပါ…။
အင်း …. အ သား တွေ ရ တာ က ဟုတ် ပါ ပြီး ဗျာ … အဲ လောက် များ တဲ. အ သား တွေ ကို ရေ ခဲ တိုက် ထား မ ပဲ ရ မှာ ပေါ. …… စတာ နော် စိတ် မ ဆိုး ပါ နဲ.
သေကြပြန်ပြီဗျို့ .. ဒီတခါ အီတလီမှာ..။
ကြည့်ရတာ မြန်မာပြည်မှာတွေ့လိုက်တဲ့ ပန်းကန်လုံးပျံထဲကအေလီယန်တွေ လိုက်ပစ်နေတယ်နဲ့တူတယ်..။
ဘာရောဂါမှ မဟုတ်ဘူး ဆို.. အမောဆို့ပြီး သေတာနဲ့ တူတယ်။ သဂျီး သူတို့ကို ဘာတွေ ခြိမ်းခြောက်လိုက်လို့.. ကြောက်အားလန့်အားနဲ့.. အမောအကော ပျံရင်း သေကြရတာလဲ.. ဒီကိစ္စ သဂျီး လက်ချက်ဘဲ ဖြစ်ရမယ်။
First published:6hours ago
The Utah Division of Wildlife Resources office in Cedar City had thousands of dead, injured and confused migrating Eared Grebes birds on its hands after the birds crash-landed in the southcentral Utah community.
DWR spokeswoman Amy Canning confirmed thatalarge flock of the water fowl plunged from the skies Monday night. An estimated 1,500 of the birds died after crash landing on the parking lot ofaWalmart store and other open areas of the city.
“These Eared Grebes were migrating south, as they usually do this time of year, but this time it was duringastorm. We’re thinking they mistook the glistening of the [Walmart] parking lot foralake,” Canning said Wednesday. “Thousands of the birds went down (and) some were killed, but we also rescuedabunch. Citizens were bringing them in from all over Cedar City.”
In all, DWR staffers and volunteers were able to rescue up to 3,500 of the birds. Most of them were taken about 60 miles south to Quail Lake, near St. George, and released on Tuesday.
Lynn Chamber, an information and education specialist for DWR’s southern region, said Cedar City residents continued to bring in birds to the agency’s office on Wednesday. “We check them out and then take them down (to the lake) and release them, too,” he said.
He estimated that roughly 35 percent of the Eared Grebes which came down from stormy skies Monday night died, putting the total numbers of the 10-14 inch, top-heavy birds that are thought to have attempted landings at near 5,000.
“These birds just aren’t built for landing on the ground, they’re designed for the water,” he said. “They are big-bodied birds relative to their size and compared to (the length of) their wings. And when they land, they come down fast, at 30-35 mph.”
If they land on water, the birds — which feed by diving for insects — are fine. But their legs, located toward the rear of their bodies, won’t supportaground landings. “They hit the ground and tumble, and that leads to broken wings, broken necks and broken bodies,” Chamberlain said.